Dhameystirka Dusha - Pandawill Technology Co., Ltd.
Si loo gaaro waxqabadka kulanka ugufiican, waxaan ubaahanahay inaan waafaqno dhammeystirka ugu habboon ee la iibin karo ee ku saabsan dalabkaaga iyo nidaamka isku-imaatinka.
Si loo qanciyo isku dhaf kasta oo ka mid ah astaanta kulanka, isticmaalka maaddada iyo shuruudaha dalabka, waxaan bixinnaa dhammaystirka soosocodka dhammaystiran ee dhammaystirka iibinta sida howlaha gudaha ah:
✓Dhaqanku wuxuu hogaaminayay HASL
✓HASL oo aan leedh lahayn
✓Immersion Gold over Nickel (ENIG), waxaa ku jira dahab adag
✓OSP (Haysashada Xakamaynta Joogtada ah)
✓Farta Dahabka ah, Daabacada Kaarboonka, Peelable S / M
✓Flash Gold (Dahaarka Dahabka adag)
✓Maaskaro la jeexjeexo: cagaar, buluug, casaan, madow, jaalle, caddaan ayaa la heli karaa
✓Shaashadda xariirta: caddaan, buluug, guduud, jaalle, madow, cagaar ayaa la heli karaa
Waxaan ku faraxsanahay inaan kaala talinno dhammeystirka ugu habboon ee ku saleysan dhowr arrimood oo ay ku jiraan nolosha shelf, u dhiibashada tixgelinta, muuqaalka dusha sare, isku xirnaanta daaqadaha u dhexeeya geeddi-socodka iyo sida iska cad qiimaha.
Dhammaan guddiyada la bixiyay waxaa ka mid ah warbixin tayo leh oo dhammaystiran oo qeexaysa qeexidda daaqadaha looxyada oo ay weheliso qayb iskutallaab ah haddii loo baahdo oo muujineysa moolka hoose ee dahaadhka dusha iyo daweynta dusha sare.
Pandawill sidoo kale waxay bixisaa noocyo kala duwan oo midab maaskara ah ah iyo dhammayn ah (dhalaal ama matte) si ay ugu habboonaato shuruudahaaga naqshadeynta. In kasta oo inta badan PCB-yada lagu soo saaray warshadaha cagaaran heerka warshadaha, waxaan sidoo kale bixinaa casaan, buluug, jaalle, cad iyo dhalaalaya caabbinta cad iyo madow oo si ballaaran loogu adeegsado soosaarida codsiyada nalalka ku saleysan LED-ka si ay u muujiyaan ama u cabudhiyaan iftiinka durugsan. Dhammaan midabada kor ku xusan waxaa la bixiyaa iyada oo aan la bixinin wax qiimo ah oo qaanadaha la adeegsado ayaa loo jaangooyay si ay u bixiyaan heerarka ugu sarreeya ee midabada soonka iyo iska caabbinta boodada iyo / ama midab beddelka markii la shaqeynayo.